Qaramada midoobey oo ka hadashay doorashada kasocota Garoowe. – Radio Daljir
Qaramada midoobey oo ka hadashay doorashada kasocota Garoowe.
Noofember 5, 2016 7:38 b 0
Muqdisho, Nov 05 2016–Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM), ayaa soo dhaweysay doorashada xubnaha aqalka hoose ee Puntland u matalaya Baarlamanka Somalia u matalaya, taasoo maanta ka bilaabatay Garowe.
Qoraalka kooban oo la soo dhigay barta Twitter-ka ee UNSOM ayaa lagu yiri”Waxaan soo dhaweynaynaa doorashada xubnaha aqalka hoose ee Puntland umatalaya Baarlamanka Somalia oo maanta bilaabatay. Waxaan rajaynaynaa inaan aragno Maamul-goboleedyada kale oo iyaguna raaca habkaan”
DHEGEYSO-Faahfaahin ku saabsan qarax caawa kadhacay Muqdisho.
DHEGEYSO-Muwaadin wado muhiim ah kadhisaya gobolada Bari iyo Gardafuu.